Maamulka doorashada oo Mursal Isa ku eedeeyay in uu si qaldan u dhaqmay | Somaliska
Mursal Isa oo ah siyaasi ka tirsan xisbiga Miljöpartiet (MP) ee magaalada Borlänge ayaa lagu eedeeyay in uu si qaldan u dhaqmay ka dib markii uu caawiyay dad codeynaya. Mursal ayaa sheegay in uu caawiyay shaqsiyaad aan aqoon sida loo codeeyo balse maamulka doorashada ayaa sheegay in aysan habooneyn sida uu u dhaqmay.
Mursal ayaa hada waxaa u yeeray maamulka qabanqaabada doorashada iyagoo sheegay in ay wadahadal la yeelan doonaan. Mursal ayaa lagu eedeeyay in uu u dhaqmay qaab aan ku habooneyn siyaasiyiinta musharaxiinta ah, isagoo la sheegay in uu dadka tusay sida loo codeeyo isla markaana aad ugu dhawaaday warqadaha doorashada. Ka dib ayaa lagu amray in uu ka baxo goobta doorashada.
Mursal ayaa ku dooday in uusan dadka u caawin in ay isaga u codeeyaan balse uu tusay oo keliya sida loo codeeyo. Isla markaana qof caawimaad uu waydiistay. Mursal ayaa la filayaa in uu guulo fiican ka gaaro dooarashada, isagoo afka hore kaga jira safka xisbiga Miljöpartiet. Waxa uu sheegay in ay jiraan dad aan ku faraxsanayn horumarkiisa oo laga yaabi in taasi ay ka dambayso abuurista arintaan.
Mursal Isa ayaa dhowaan loo doortay in uu ka mid noqdo maamulka dhexe ee xisbiga Miljöpartiet isagoo noqday qofkii ugu horeeyay ee Soomaali ah oo siyaasada ka gaara heerkaas.